विकीको मिशन के हो? - अर्ल्टरले जवाफ पाउँछ
ओलिभर राजा, सेल्टल्ट विशेषज्ञले भन्छ कि विकीले डिजिटल इन्साइक्लोपीडियाको रूपमा काम गर्दछ जुन धेरै प्रकारका विषयहरूको शीर्षक देखाउन सक्छ। आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन यसको सफलताको कारण यो सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएका वेबसाइटहरू मध्ये एक हो। "पर्सूनिया टर्मिनल" को निर्माण पछि यो साइटमा5लाख भन्दा धेरै लेखहरू छन् जो विभिन्न विषयहरू लुकाउँछन्। विभिन्न पक्षमा विश्वभर विभिन्न विभिन्न सिद्धान्तहरु मा आफ्नो ज्ञान व्यक्त गर्ने पोडियम छ। वैज्ञानिकहरूले पनि विकिपीडिया प्रयोग गर्नका लागि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजहरू बताउँछन्।
साथै, विकिपीडियामा कुनै पनि सामग्री आवश्यक उद्धरण र सन्दर्भ प्रदान गर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि सन्दर्भ सामग्रीमा सीधा दृष्टान्तहरू र लिङ्कहरू र ट्यूटोरियलहरू छन्। मान्छे Wiki संग सल्लाह गर्न सक्छन् विभिन्न विषयहरूमा गाइड प्राप्त गर्न। कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि कुरामा उनको विचारहरू पढ्न, सम्पादन गर्न, टिप्पणी र साझा गर्न अनुमति दिइएको छ। छोटो लामो कथा काट्नका लागि, विकिपीडिया संसारको कुनै पनि व्यक्तिद्वारा प्रयोगको लागि निःशुल्क छ। साथै, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नै प्रयोगकर्ता खाताहरू सिर्जना गर्न सक्छन्।
शीर्ष 35 सर्वाधिक लोकप्रिय वेबसाईटहरूमा, विकिपीडिया मात्र एक गैर-लाभकारी संगठन वेबसाइट हो जसले ठूलो होस्ट स्पेसको आवश्यक पर्दछ। यो होस्टिङ स्पेसमा 30 भन्दा बढी टेबाइट्स होस्ट गरिएको छ। शोधकर्ताहरूले अनुमान लगाएका छन् कि विकिपीडिया पृष्ठहरूमा हालका लेखहरू कम्तिमा 18 लाख रुपैयाँ प्रयोग गर्दछ। यी सन्दर्भहरूमा हरेक दिन 2.5 बिलियन पृष्ठ हेराइहरू छन्। नतिजा, विकिपीडियामा एक विशाल ज्ञान आधार छ, सबै अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानको आधार पार गर्न। प्रयोगकर्ताले Wiki सँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ थुप्रै कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।
विकिपीडियामा 15 जनवरी 2001 को सुरुवात गरिएको थियो। यसको परम्परागत पृष्ठको पहिलो प्रतीक उपस्थिति पनि नोभेम्बरमा भएको छ। विकिपीडिया वर्ष 2007 सम्म2मिलियन लेखमा पुग्यो। 2009सम्म, यो3मिलियन ग्राहक थिए र 2012 मा4लाख। यसको मुख्य मिशन मध्ये सबै मानव ज्ञानको पहुँच संग संसार प्रदान गर्दछ!
यी उपलब्धिहरूको बावजूद, विकिपीडियाले आफ्नो लक्ष्यको दिशामा रह्यो। यसको5मिलियन लेखको लेखबाट, यसलाई घोषित गरिएको थियो कि उनीहरूले उनीहरूको लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण भागमा 100 मिलियन भन्दा बढी लेखहरू चाहिन्छ। मानव ज्ञानको योगफल एक साधारण वेबसाइटमा सङ्कलन गर्न सरल कार्य होइन। लाइब्रेटको साथ कुराकानीमा, विश्वको अन्य विविध क्षेत्रहरु लाई आवरण गर्न अधिक लेख चाहिन्छ। पश्चिम तिर वेबसाइट को झुकाव एक महत्वपूर्ण कमी को रूप मा आउन सक्छ।